Verious – Page2– Bachan Tv
Nepali Christian message by Sarita Thapa
Posted on January 4, 2019 January 4, 2019 by BACHAN TV
Posted in Verious, Video
Posted on December 24, 2018 December 24, 2018 by BACHAN TV
अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय लगायतका हितमा छैन
Posted on August 18, 2018 August 18, 2018 by BACHAN TV
सतावट बोलावट हो
Posted on June 25, 2018 June 25, 2018 by BACHAN TV
बाइबल पढ्दा कोही बोलको अनुभव गरें
Posted on June 24, 2018 June 24, 2018 by BACHAN TV
पापको बन्धनबाट कसरी छुटकरा पाउने ?
Posted on April 22, 2018 April 22, 2018 by BACHAN TV
नेपाली ख्रीष्टियन युवा मञ्चको केन्द्रिय बैठक
Posted on March 18, 2018 March 18, 2018 by BACHAN TV
नेपाली ख्रीष्टियन युवा मञ्चको केन्द्रिय बैठक सम्पन्न भएको छ । सो मञ्चका अध्यक्ष कमल अधिकारी हुनुहन्छ । यस मञ्च पछिल्लो समयमा नेपाली इसाई समुदायमा सक्रिय हुँदैआइरहेको छ ।
७ प्रदेशमा संगठन विस्तार गर्नको लागि प्रदेश प्रतिनिधिहरुसँग समन्वयन गरि प्रादेशिक भेलाको लागि आधिकारीक पत्र पठाउने र मञ्चलाई प्रभावकारी रुपमा प्रदेश लागायत स्थानिय निकायसम्म पु-याउने जानकारी प्राप्त भएको छ ।
सो मञ्चले आउँदो बैशाख १ गतेका दिनमा युवा सम्मेलन तथा शुभकामना आदन प्रदान गर्नेछ । सो कार्यक्रममा आत्मिक जागृतिसम्बन्धमा विभिन्न व्यक्तिहरुले सिकाउने छन् ।
सो मञ्चलाई अन्तराष्ट्रियस्तरमा पु-याउनको लागि कार्य गरिरहेको छ । सो वैठकमा अमेरिका ओहाइओ निकासी पाष्टर अब्राहम दियालीलाई नेपाली ख्रीष्टियन युवा मञ्चको संयोजक (अमेरिका) रुपमा जिम्मेबारी दिने सर्वसम्मतबाट पारित गरिएको महासचिव तुलसी श्रेष्ठले बताउनु भएको छ ।
येशू तपाईंलाई राजा घोषणा गर्दछौं
Posted on February 13, 2018 February 13, 2018 by BACHAN TV
Posted on November 13, 2017 November 13, 2017 by BACHAN TV
सबैले डिभी–डिभी भन्थे, वास्तवमा डिभीको अर्थ मलाई थाहा थिएन । त्यसैले साथीहरूले जवाफ दिन्थे, डिभी भनेको दिनभरि भौतारिनु हो त कसैले डिभीको अर्थ दाल भात भनि रमाईलो गरे, वास्तवमा यसको अर्थ अहिले आएर मात्र मलाई थाहा भयो । डिभी भनेको त इलेक्ट्रोनिक ड्राइभसिटी भिसा रहेछ । यो इन्टरनेटको सहायताले निःशुल्क आवेदन दिन पाइने एक प्रकारको चिट्ठा हो । इ–डिभीले अमेरिका प्रवेशका लागि कानुनी मान्यता दिन्छ तर रोजगारीको ग्यारेन्टी दिदैन । अमेरिकी सरकारले प्रदान गर्ने विभिन्न २ सय प्रकारका भिसामध्ये डिभी सवैभन्दा सजिलो र धेरै समय बसोवास गर्न मिल्ने भिसा हो । यो भिसा मार्फत अमेरिकाको नागरिक हुन सजिलो हुन्छ । ग्रीन काड प्राप्त गर्ने सजिलो माध्यमका रुपमा रहेको डिभी चिट्ठा कार्यक्रममा हरेक वष्र्। विश्वका विभिन्न देशका मानिसहरूले आवेदन दिन्छन् । बर्सेनी डिभी भर्नेहरूको संख्या एक करोड नाघ्छ । चिट्ठा परेपछि फस्ट लेटर, सेकेन्ड लेटर, अन्तर्वाता, स्वास्थ्य परीक्षण आदि प्रक्रिया पुरा गर्नु पर्छ । यसका लागि हाई स्कुल लेभल अर्थात प्लस टु उत्र्तिण हुनु पर्छ । आम नपढेकाहरूले कमै पाउन सकिन्छन् ।
त्यही भएर पनि होला डिभी भर्ने र नतिजा हेर्नेको भिड ग्याँस र पेट्रोलको लाईनमा जस्तो हुन्छ । पर्नेहरूलाई त खुसीले साथ दिइहाल्छ तर नपर्नेहरू पनि भन्ने गहन नभएन्जेलसम्म डिभी भरि रहन्छ । एक दिन न एक दिन कसो नपर्ला त भनेर अर्काे वर्ष फेरि भर्ने आशा सहित फर्केको मैले देखेको छु । सपनाको मुलुक अमेरिका पुग्ने रहर कसलाई नहोला । कारण यहि हो, त्यहा“को लाईफस्टाइल, गगन चुम्बी भवन उच्चस्तरीय प्रविधि सफासुग्घर सडक, व्यस्त र रमाईलो दैनिकी अमेरिकाको पहिचान हो । न्यून स्तर भएका नेपालीहरूका निम्ति अमेरिका पुग्न त्यति सहज थिएन । तर आज डिभीले न्यून स्तर भएकाहरूका लागि पनि ढोका खोलिदिएको छ । आज डिभीबाट मात्र हैन, जुनसुकै माध्यमबाट पनि अमेरिका पुग्न सकिन्छ । मुख्य कुरा यो हो कि त्यहा“ पुगे पछि फर्केर आउने हो कि भागेर त्यहि बस्ने हो यो प्रश्नले भिसा लागे पछि धेरैैलाई निन्द्रा लाग्दैन । धेरै नेपाली भागेको कारण पनि हो आज भोलि अमेरिकाको भिसा लाग्न सहज छैैन ।
मैले डिभी परेर अमेरिका जानेहरूलाई व्यंग्य गरेको होइन । डिभी भर्नेहरूलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको पनि होइन । खाली एउटा प्रश्न राख्न मन लागेको मात्र हो । हामी किन डिभी भरिरहेछौं ? किन मरिहत्ते गरिरहेछौं अमेरिका भनेर ? हामीले कहिल्यै गहिराइमा गएर बुझ्ने प्रयास गरेका छौं, कि अमेरिका गएर बस्ने नेपालीहरू कति खुशी छन् ? अमेरिका गएर बसेका नेपालीहरू घरिघरि रोएको कहिल्यै देखेका छौं ? त्यसो त रुने आफ्नै देशमा पनि छन् । समस्याहरू यहा“ अझ बढी होलान् तर आफ्नै देशमा रुँदा चुहिने आँसुले पनि छुट्टै आनन्द दिन्छ । आमालाई घुर्की लगाएर रोए जस्तो हुन्छ यहा“ । आँशु पुछिदिनेहरू पनि प्रशस्तै हुन्छन् । त्यहा“ त आँशु पनि पानी जस्तै बगेर जान्छ । रुने फुर्सद पनि हुँदैन, बाहिर पोख्ने ठाउ“ पनि हुँदैन । यी सबै कुरा बुझेर पनि घर, बारी, आमाबुवाका आँशु रित्याएरै जाने
सोच लिएर हामीले हरेक वर्ष डिभी भर्न छाडेका छैनौं ।
आज परमेश्वरका धेरै छोराछोरी परमेश्वरको इच्छा भन्दा पनि आफ्नो इच्छामा चाडै धनी र मोजमस्तीको जीवन जिउने इच्छा देखेर विभिन्न माध्यमबाट अमेरिका जान मानिसहरूको खुट्टामै पुगेर चिप्लो घसेको देख्दा मलाई दुःख लागेर आउँछ । यदि परमेश्वरको इच्छा भए तपाईंलाई कुनै न कुनै माध्यमबाट अमेरिका लानु हुन्छ । डिभी नै भरिरहनु पर्दैन तर परमेश्वरको इच्छा छैन भने अमेरिकाको दुतावास अगाडि गएर लम्पसार परेर सुते पनि पाउनु हुन्न । जब तपाईं आज्ञाकारी र नम्रतामा जिउनु हुन्छ तब परमेश्वरले तपाईंको लागि नसोचेका ढोकाहरू खोल्नु हुन्छ । त्यसैले यर्मिया ३३ः३ मा परमेश्वरले भन्नु हुन्छ, मलाई पुकार म तँलाई जवाफ दिनेछु । हामीले व्यक्तिको पुकार गरेका छौं कि परमेश्वरलाई पुकार गरेका छौं । यदि हामी परमेश्वरमाथि भरोसा गर्छौं भने परमेश्वरले हामीलाई अमेरिका मात्र होइन, संसारको प्रत्येक राष्ट्रका साथै चन्द्रमामा पनि पु¥याउनु हुनेछ ।